Reddit & Quora မှ NMN - AASraw အကြောင်းမေးခွန်း ၁၂ ခု (အလွန်ဆွေးနွေးငြင်းခုံသည်)
/ဘ‌‌လော့ခ်/ပြတိုက်/Reddit & Quora မှ NMN အကြောင်းမေးခွန်း ၁၂ ခု (အလွန်ဆွေးနွေးငြင်းခုံသည်)
အပေါ် Posted 08 / 19 / 2021 by ၏ ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
NAD+ သည် NMN နှင့်ဘာလုပ်ရမလဲ။
အစားအစာမှအိုမင်းရင့်ရော်မှုအထိ NMN လုံလောက်စွာရနိုင်သလား။
NMN Powder ကိုဘယ်လိုယူရမလဲ။
NMN သည် COVID-2019 ကိုဆန့်ကျင်ရန်အထောက်အကူဖြစ်ပါသလား။
NMN VS. NR: ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲ။
ငါအကောင်းဆုံး NMN အမှုန့်ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
NMN Powder အပေါ်မည်သည့်စစ်မှန်သောသုံးသပ်ချက်များရှိပါသလား။
အားလုံးသိကြသည့်အတိုင်းအိုမင်းရင့်ရော်မှုတိုက်ဖျက်ရေးထုတ်ကုန်များသည်အမြဲတမ်းခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလူများစွာသည်ဤကဏ္ study ကိုအချိန်ကြာကြာလေ့လာနေသည်၊ ၂၀၁၈ တွင်အိုမင်းရင့်ရော်မှုအတွက်ဆေးဝါးအသစ်များပေါ်လာပြီး၎င်းသည်အိုမင်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်သောထုတ်ကုန်များကိုစွဲလမ်းစေသည်။ NMN” NMN (β-Nicotinamide Mononucleotide) သည်အိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုဆန့်ကျင်သောဖြည့်စွက်စာအမျိုးအစားအသစ်အဖြစ်အလွန်နာမည်ကြီးသည်။ NMN ဖြည့်စွက်စာများ (သို့) နံနက်စာသို့ NMN အမှုန့်အချို့ထည့်ခြင်းသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှစ၍ အလွန်တွေ့ရများသည့်အရာဖြစ်သည်။ NMN အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိသင့်သောအချက်များနှင့် NMN အမှုန့်ကိုအွန်လိုင်းမှမည်သို့ ၀ ယ်ရမည်နည်း၊ မေးခွန်းအားလုံးသည် NMN အမှုန့်သို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်အဆင်သင့်သုံးသောသူအများစုကစိုးရိမ်နေသည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည် NMN တွင် reddit နှင့် quora မှဆွေးနွေးထားသောအကြောင်းအရာများကိုအွန်လိုင်းမှအများဆုံးစုဆောင်းထားသောကြောင့်ဤအဖြေများသည် NMN ကိုသိရန်နှင့်စစ်မှန်သော NMN အမှုန့်ကို online မှကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
NMN သည် nicotinamide mononucleotide (CAS: 1094-61-7)၊ မျိုးစိတ်အားလုံးတွင်သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေသောမော်လီကျူးတစ်ခု၏အတိုကောက်ဖြစ်သည်။ မော်လီကျူးအဆင့်တွင်၎င်းသည် ribonucleotide၊ nucleic acid RNA ၏အခြေခံဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဖြစ်သည်။ ပုံစံအားဖြင့် nicotinamide အုပ်စု၊ ribose နှင့် phosphate အုပ်စုတို့ပါ ၀ င်သည်။ NMN သည်ဗီတာမင် B3 (niacin) ဆင်းသက်လာသည်။ ၎င်းသည်သဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ်ပြီးသစ်သီးများ၊ နို့နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကဲ့သို့သောအာဟာရရင်းမြစ်များမှပြုလုပ်နိုင်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်၌ NMN ကိုထုတ်လုပ်ရန်သုံးသည် nicotinamide adenine dinucleotide ဖြစ်သည် (NAD+) သည်ခန္ဓာကိုယ်၏ဆဲလ်တိုင်း၌တွေ့ရသောအစွမ်းထက်နှင့်မရှိမဖြစ်မော်လီကျူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် NMN အမှုန့်ကိုယူခြင်းသည်ဆဲလ်အတွင်းရှိ NAD+ အဆင့်ကိုတိုးစေနိုင်ပြီး၊ အိုမင်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်သောရည်ရွယ်ချက်ကိုရရှိစေသည်။
ယခုလောလောဆယ်တွင် NMN အမှုန့်ဟုခေါ်သောစက်ရုံတွင် NMN ကုန်ကြမ်းများထုတ်လုပ်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ငါသိသလောက်တော့ငါ NMN အမှုန့်ကိုထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံကနည်းလမ်း ၂ ခုကိုငါသိပြီးပြီ။
NMN အမှုန့်ထုတ်လုပ်ရန်နည်းလမ်း ၁ ။ Catalyst နည်းလမ်း (စက်မှုအဆင့်)
လူသားများအတွက်မသင့်တော်သောစက်မှုသုံးဓာတုတုံ့ပြန်မှုအတွက်သာဤထုတ်လုပ်သောထုတ်ကုန်သည်အမှုန့်အတွင်း၌လေးလံသောသတ္တု၊ အဏုဇီဝဗေဒညွှန်ပြချက်ကိုရှာဖွေရန်မလိုအပ်ပါ၊ ၎င်းသည်အန္တရာယ်ရှိသည်။
NMN အမှုန့်ထုတ်လုပ်ရန်နည်းလမ်း ၂ - Enzymatic method (Food Grade)
ဤနည်းလမ်းအားဖြင့် NMN အမှုန့်သည်လူတို့အသုံးပြုရန်လုံခြုံပြီး Reagent အကြွင်းအကျန်မရှိ၊ အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ပြင်ပစံနည်းလမ်းကိုပင်သုံးသည်၊ ရလဒ်သည် ၉၈% သန့်ရှင်းမှုမရှိသေးပေ။ (အချိုမှုန့်ရရှိရန်မိခင်အရည်ကိုရိုးရှင်းသောခြောက်သွေ့သောထုတ်ကုန်အချို့ရှိပါသည်၊ သန့်ရှင်းမှုကိုစမ်းသပ်ရန် HPLC နည်းလမ်းကိုသုံးပါ၊ ၎င်းသည် ၉၈%ထက်မနည်းပါ၊ သို့သော်၎င်းကိုတိုင်းတာရန်ပြင်ပစံနည်းလမ်းကိုသုံးသောအခါခြားနားချက်သိသာလိမ့်မည်။ မရ။
AASraw သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင် NMN အမှုန့်ကိုထုတ်လုပ်ရန်ထုတ်လုပ်သောစက်ရုံတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သုံးသောနည်းလမ်းသည် enzymatic နည်းလမ်းဖြစ်သည်၊ အသုတ် NMN အမှုန့်ကိုမရောင်းမီစမ်းသပ်မည်ဖြစ်ပြီးသန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုသည် ၉၉% min၊ အရည်အသွေးတည်ငြိမ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားသောအာဟာရဖြည့်ကုမ္ပဏီများစွာနှင့်သဘောတူညီမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့အား NMN အမှုန့်ကိုရေရှည်ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ Enzymatic နည်းလမ်းသည်စက်ရုံအများစုအတွက်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြောင်းသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ ထို့ကြောင့် ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ NMN အမှုန့်ကိုသင်၏ပေးသွင်းသူနှင့်အတည်ပြုပေးပါ NMN အမြောက်အများကို ၀ ယ်ပါ အမှုန့်။
NAD သည် nicotinamide adenine dinucleotide ကိုဆိုလိုသည်။ ဘက်တီးရီးယားများမှမျောက်ဝံများအထိ၎င်းသည်ဆဲလ်များဇီဝြဖစ်ပျက်မှုတွင်အပေါများဆုံးနှင့်အရေးပါသောမော်လီကျူးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်တိုင်း၌ NAD ဓာတ်ရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် NAD+မပါ ၀ င်ဘဲစက္ကန့် ၃၀ အတွင်းသေလိမ့်မည်။ NAD+ သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသောဓာတ်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှုကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။
NAD+ သည်ဆဲလ်များမော်လီကျူးတစ်ခုမှအခြားတစ်ခုသို့အီလက်ထရွန်များလွှဲပြောင်းပေးသည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘတ်စ်ကားတစ်ခုအနေနှင့်လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည်အာဟာရဓာတ်များကိုစွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးပြီးအခြားဆဲလ်များလုပ်ဆောင်မှုကိုထိန်းညှိပေးသောပရိုတိန်းများအတွက်အထောက်အကူမော်လီကျူးအဖြစ်အလုပ်လုပ်သည်။ NAD+ ၏အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များမှာအိပ်စက်ခြင်း/နိုးစက်ဝန်းကိုထိန်းညှိပေးခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ NAD+ သည် sirtuins များကိုဇီဝြဖစ်မှုကိုထိန်းညှိပေးပြီးတည်ငြိမ်သော chromosomes များကိုထိန်းသိမ်းပေးသည်။ မော်လီကျူးသည်ပျက်စီးသွားသော DNA ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရာတွင်ကူညီသည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ် NAD+ အဆင့်ကိုထိန်းထားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်ငါတို့အား NAD+ အဆင့်ကိုမြှင့်တင်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားငယ်ရွယ်နုပျိုစေပြီးအိုမင်းခြင်းကိုတိုက်ထုတ်ရန်ကူညီသည်။ ဒါဆိုငါတို့ NAD+ အဆင့်ကိုဘယ်လိုမြှင့်တင်သင့်လဲ။
သိပ္ပံပညာရှင်များပြောသည့်အတိုင်း NAD+ အဆင့်ကိုမြှင့်တင်ရန်နည်းလမ်းသုံးမျိုးရှိသည်။
အစားအသောက်ပုံစံကိုထိန်းညှိသည်မရ။ အဆီဓာတ်မြင့်မားသောအစားအစာများနှင့် keto (သို့) Atkins ပုံစံအစားအစာကဲ့သို့သောကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နည်းသောအစာသည် ketosis အခြေအနေကိုတိုးတက်စေသည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည် ketosis ဖြစ်နေလျှင်ဂလူးကို့စ်အစားစွမ်းအင်အတွက်အဆီကိုသုံးသည်။ ဤနည်းသည် NAD+ နှင့် NADH အချိုးကိုတိုးစေပြီး၎င်းသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အားဓာတ်တိုးခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
NAD+ ဖြည့်စွက်မရ။ မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ NAD+ကိုထုတ်လုပ်ဖို့အကန့်အသတ်ရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်သန့်ရှင်းမှုအာမခံချက်ပေးတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ရဲ့ဖြည့်စွက်စာကိုမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီအဆင့်တွေကိုမြှင့်တင်ဖို့နာကျင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဘဲ။ ဤဖြည့်စွက်စာများတွင် nicotinamide, nicotinic acid, nicotinamide mononucleotide (NMN) နှင့် nicotinamide riboside (NR) တို့ပါဝင်သည်။ 【 Nicotinic acid သည် NAD+ သို့အဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့်ပြောင်းသည်။ ပထမအဆင့်တွင် NAPRT အင်ဇိုင်းသည် nicotinic acid ကို nicotinic acid mononucleotide (NAMN) သို့ပြောင်းသည်။ ဒုတိယအဆင့်တွင် NMNAT အင်ဇိုင်းသည် NAMN ကို nicotinic acid adenine dinucleotide (NAAD) သို့ပြောင်းသည်။ NAD+ synthetase (NADS) အင်ဇိုင်းသည် NAAD ကို NAD+ သို့ပြောင်းသည်။ ဆယ်ယူရေးလမ်းကြောင်း၌ NAD+ biosynthesis သည်အင်ဇိုင်း၊ phosphoribosyltransferase, NMNAT မှတဆင့် nicotinamide ၏ NMN သို့ NMN သို့ကူးပြောင်းခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။ အင်ဇိုင်းသည် NMN ကို NAD+သို့ပြောင်းသည်။
အဆက်မပြတ်အစာရှောင်ခြင်းလေ့ကျင့်ပါမရ။ အရွယ်ရောက်သူအများစုအတွက်ပြင်းထန်သောကယ်လိုရီကန့်သတ်ချက် (သို့) အချိန်ကြာရှည်စွာအစာရှောင်ခြင်းကိုမထောက်ခံသော်လည်းတိုတိုသို့မဟုတ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအစာရှောင်ခြင်းသည်အလားတူရလဒ်များကိုပြနိုင်သည်။ အဆက်မပြတ်အစာရှောင်ခြင်းသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အားအစာမစားဘဲအချိန်ကြာရှည်စွာမိတ်ဆက်ခြင်းသည် ပို၍ ရေရှည်တည်တံ့သောနည်းလမ်းဖြစ်ပြီး ketosis ကဲ့သို့သင်၏ NAD+ အဆင့်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်သင့်တွင်ဆီးချိုရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ (သို့) LDL ကိုလက်စထရောမြင့်တက်နေပါကအဆီဓာတ်များသောအစားအစာကိုမစားသင့်ပါ။ ထို့အတူအစာရှောင်ခြင်းသည်ကျန်းမာရေးအခြေအနေရှိသောသူများအတွက်အကြံပြုလိုခြင်းမရှိသော်လည်းအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဆက်ရန်ခက်ခဲလေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် NMN အမှုန့် (သို့) အခြားအရာများနှင့်ဖြည့်စွက်ပါ NAD အာဟာရ NAD ထုတ်လုပ်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်အလုံခြုံဆုံးနှင့်အဆင်အပြေဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်လေ့ရှိသည်။
ငါတို့ NAD+ ကိုဘယ်လိုသိလဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ၊ ငါ NMN အမှုန့်ကိုဘာကြောင့်ယူဖို့လိုလဲဆိုတာမင်းသိဖို့လိုလိမ့်မယ်။ NMN အမှုန့်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ထဲသို့ ၀ င်သောအခါမည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။ လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြင့် NMN သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့မ ၀ င်မီ NAD+ ၏ရှေ့ပြေးဖြစ်သည်။ NMN အမှုန့်ကိုယူခြင်းသည် NAD+ အဆင့်ကိုမြင့်တက်စေပြီးအိုမင်းရင့်ရော်မှုအရှိန်ကိုကူညီပေးနိုင်သည်။
ယခုအချိန်ထိအချက်အလက်အများစုသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမပြသေးသောတိရစ္ဆာန်များမှဖြစ်သည်။ ရေရှည်ကြွက်များလေ့လာမှုသည် ၁၂ လကြားဖြတ်ကာလတစ်လျှောက်လုံးအဆိပ်ပြင်းခြင်း၊ ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသို့မဟုတ်သေနှုန်းမြင့်တက်ခြင်းမရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သိသလောက်တော့မကြာသေးမီကဂျပန်မှလူသားတစ် ဦး ကိုစမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ NMN အမှုန့်ကိုစိတ်ချစွာသောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ NMN ကိုကျန်းမာသောအမျိုးသား ၁၀ ဦး အားစီမံခဲ့သည်။ ၁၀၀၊ ၂၅၀ နှင့် ၅၀၀ မီလီဂရမ် NMN ဆေးများကိုပေးသည်။ NMN ၏တစ်ခုတည်းသောပါးစပ်စီမံခန့်ခွဲမှုသည်နှလုံးခုန်နှုန်း၊ သွေးဖိအား၊ အောက်ဆီဂျင်ရွှဲခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကဲ့သို့သိသာထင်ရှားသောလက်တွေ့လက္ခဏာများကိုမဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါ။ ယေဘူယျအားဖြင့် NMN အမှုန့်သည်လုံခြုံပြီးကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်းအတည်ပြုရန်ကူညီသည်။ အဆုံးသို့ရောက်သောအခါစမ်းသပ်မှုသည်အောင်မြင်သည်ဟုယူဆနိုင်သည်။ ဤလေ့လာမှုသည်အိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေးကိုတိုင်းတာခဲ့ပြီး NMN စားသုံးမှုမတိုင်မီနှင့်အပြီးကွာခြားမှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
လူသားစမ်းသပ်မှုအရေအတွက်အကန့်အသတ်ကြောင့်သိပ္ပံပညာရှင်များသည် NMN ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုဆက်လက်စူးစမ်းရှာဖွေလျက်၊ ဤစမ်းသပ်မှုမှအိုမင်းရင့်ရော်မှုထုတ်ကုန်အသစ်အားတရားဝင်ဖြန့်ချိနိုင်ရန်သေချာသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် Time Magazine မှကမ္ဘာ၌သြဇာအရှိဆုံးလူ ၁၀၀ တွင်တစ် ဦး ဖြစ်သည့် Dr. David Sinclair အကြောင်းပြောရန်လိုသည်။ NMN ဖြည့်စွက်စာများကိုအသက်အရွယ်ကြီးရင့်သောလုပ်ငန်း၌သူငယ်ချင်းများနှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာတွဲနေခဲ့သည်။ သူသည် NMN အမှုန့်ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာယူပြီးနောက်သူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံကိုဝေမျှခဲ့သည်။ သူက“ ငါ resveratrol, metformin နဲ့ aspirin အပါအ ၀ င်အခြားဖြည့်စွက်စာတွေနဲ့နေ့တိုင်းငါ NMN ၁ ဂရမ်ကိုအမြဲယူခဲ့တယ်။ ငါဗိုက်အောင့်တာကလွဲလို့ဘာမှမကြုံဖူးဘူး။ ” NMN ကိုပူ/နွေးသောအပူချိန်တွင်သိုလှောင်သောအခါ NMN သည်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အား Nicotinamide အဆိပ်သင့်စေသောကြောင့် NMN အမှုန့်ကိုအေးမြသောရာသီဥတုတွင်သို့မဟုတ်ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်ထားသင့်ကြောင်းသတိပေးခဲ့သည်။
NMN (Nicotinamide Mononuleotide) သည် NAD+၏သဘာဝရှေ့ပြေးဖြစ်သည်။ NMN ဖြည့်စွက်သည်အခြားကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုပေးသောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကျန်းမာရေးနှင့်အသက်ရှည်မှုအတွက် DAN+ ကိုမြှင့်တင်သည်။ ယနေ့အချိန်ထိအချိန်ကြာမြင့်စွာဆေးပမာဏမြင့်စွာပင်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများရှိသည့်အထောက်အထားမရှိသေးပေ။ ၎င်းသည်အမျိုးအစား II ဆီးချိုရောဂါနှင့်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုပြသခဲ့သည် အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအောက်တွင် NMN အမှုန့်၏ထိပ်တန်းအကျိုးကျေးဇူး ၁၀ ချက်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
Ag Anti-Aging အကျိုးသက်ရောက်မှု
broken ပျက်စီးသွားသော DNA strands များကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရာတွင်လွယ်ကူစေသည်
cholesterol ကိုလက်စထရောနှင့် triglycerides ကိုလျော့ကျစေသည်
neuro neuroinflammation ကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့် mitochondrial function ကိုတိုးတက်စေသည်
အဖြေက“ မဟုတ်ဘူး” အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် NMN ကိုအစားအစာများစွာတွင်သဘာဝအားဖြင့်တွေ့နိုင်ပြီး NMN ၌အမြင့်ဆုံးအစားအစာခြောက်မျိုးမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
အခုမင်းစဉ်းစားရမှာက "NMN ကိုအစားအစာမှာတွေ့ရင်ငါအဲဒီ့အစားအစာတွေကိုပိုစားခြင်းဖြင့်ငါ့အဆင့် NAD+ ကိုငါတိုးလို့မရဘူးလား။ " ဒါကကောင်းတဲ့မေးခွန်းပါ။ ဒါပေမယ့်မင်း NMN နဲ့အိုမင်းမှုကိုပြောင်းချင်ရင်ငါဒီအစားအစာတွေအများကြီးကိုစားရမယ်လို့ငါထောက်ပြသင့်တယ်။ ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းသည်မှာဘရိုကိုလီ၏ပင်စည်အနည်းငယ်၌ NMN သည် NMN အဆင့်ကိုမြှင့်တင်ရန်ပင်မလုံလောက်တော့ပါ။ NMN သည်ဤအစားအစာများတွင်တွေ့ရသော်လည်းအာရုံစူးစိုက်မှုမှာအစားအစာတစ်ကီလိုလျှင် ၁ မီလီဂရမ်ထက်နည်းသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် NMN ၁ မီလီဂရမ်ရရှိရန်ဘရိုကိုလီ ၁ ကီလိုဂရမ်ခန့်သင်စားသင့်သည်။ NAD+ အဆင့်ကိုမြှင့်တင်ရန် NMN ပမာဏသည်ရာဂဏန်းမီလီဂရမ်တစ်ရာတွင်ရှိသင့်သည်။ ဒါကဘရိုကိုလီဘယ်လောက်ပဲစားစားငါတို့ရဲ့အစားအစာတွေကနေရနိုင်တာထက်အများကြီးပိုမြင့်တယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် NMN အမှုန့်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ တွင်အိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုဖြည့်စွက်စာအဖြစ်ယူရန်စဉ်းစားရမည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်အား NAD+ကိုတိုးစေပြီးအိုမင်းခြင်းကိုတိုက်ဖျက်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးမေးခွန်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နေ့စဉ် 1g NMN ယူခဲ့သော Dr. David Sinclair ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၁ ဂရမ်သည် NMN ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုရရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အထိရောက်ဆုံးသောက်သုံးသောဆေးဖြစ်ပါသလား။ "မဟုတ်တာသေချာတယ်!" သင်မည်မျှယူရန်လိုအပ်သည်ကိုလုပ်ဆောင်သောအခါ NMN ကိုမည်သို့စီမံခန့်ခွဲသည်နှင့်၎င်း၏ဇီ ၀ ရရှိနိုင်မှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသည်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး၊ မတူညီတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ကွဲပြားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်။ NMN ကိုယူဖို့ကောင်းတယ်၊ ဘယ်လိုယူရမလဲ၊ NMN အမှုန့်ကိုယူဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အခါငါတို့ဘယ်လောက်သောက်သင့်လဲ။
ပထမမေးခွန်းကို NMN အမှုန့်ဘယ်လိုယူမလဲ။
NMN ကို NMN ကမင်းရဲ့သွေးကြောထဲကိုတကယ်ရောက်အောင်ပို့ပေးမယ့်ရွေးချယ်မှုလေးမျိုးမှာအမှုန့်၊ sublingual အမှုန့်၊ စံဆေးတောင့်နဲ့အစာအိမ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့တောင့်တွေပါ။
bioavailability ကိုနားလည်ရန်ပထမ ဦး စွာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနားလည်ရန်လိုအပ်သည် (၎င်းသည်အသည်းသို့သွေးထဲသို့တကယ်မ ၀ င်မီခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်သည်ကိုဆိုလိုသည်) ။ ဒါကရှုပ်ထွေးတဲ့အယူအဆဘဲ၊ ဒီဗွီဒီယိုကငါတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့ကူညီနိုင်မယ်၊ NMN အမှုန့်မသုံးခင်အဲဒါကိုသိဖို့ငါတို့အတွက်အရမ်းအရေးကြီးတယ်လို့ငါထင်တယ်။ ပထမဆင့်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကြောင့် NMN ၏ပါးစပ်စားသုံးမှုသည် sublingual သို့မဟုတ်အစာအိမ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောတောင့်များထက်များစွာထိရောက်မှုလျော့နည်းသည်။ NMN အမှုန့်ကိုပါးစပ် (အစာစားသောအခါ (သို့) အရည်နှင့်ရောသောအခါ) အများစုသည်အစာအိမ်အက်ဆစ်ဖြင့်ဖျက်ဆီးသည်။ ကျန် NMN ကိုအသည်းမှ metabolized လုပ်သည်။ အသည်းက NMN ကိုဘယ်လို metabolizes လုပ်သလဲဆိုတာက bioavailability အတွက်အများကြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည် NMN ၏အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်ကိုသာသင်၏စနစ်ထဲသို့အမှန်တကယ်ထည့်သွင်းပေးနိုင်သည်။ သင်၏ NAD+ အဆင့်များကိုတိုးတက်စေရန်သင်ကဲ့သို့ Sirtuin Activator ကဲ့သို့ Sirtuin Activator ဖြင့်ဖြန့်ချိသော NMN ဆေးတောင့်များကိုယူနိုင်သည်။ Resveratrol Resveratrol ၏ bioavailability ကိုအထောက်အကူပြုသောပြည့်ဝဆီဒိန်ချဉ်နှင့်
သို့သော် NMN (သို့မဟုတ်မည်သည့်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်စာ) ကို sublingually ယူသောအခါ၎င်းကိုလျှာအောက်ရှိချွဲအမြှေးပါးများ (စုပ်ယူ) ပြီးသွေးကြောထဲသို့တိုက်ရိုက်ဖြတ်သန်းသည်။ ထိုမှသည် ဦး နှောက်နှင့်အခြားအင်္ဂါများဆီသို့တိုက်ရိုက်သွားကာအသည်းမှပထမ ဦး ဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကျော်ဖြတ်သည်။ ၎င်းသည် sublingual NMN (သို့) အစာအိမ်ခံနိုင်ရည်ရှိသောဆေးတောင့်ကိုသောက်ခြင်းသည်အထိရောက်ဆုံးနှင့်အထိရောက်ဆုံးဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ၎င်းသည် NMN အမှုန့်ကိုနှုတ်သို့မဟုတ်စံဆေးတောင့်ပုံစံထက်သောက်ရန်လိုအပ်သည်။
နောက်မေးခွန်း - NMN အမှုန့်ကိုယူရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ကဘာလဲ။
Waterloo တက္ကသိုလ်မှသုတေသနအသစ်အရအသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှုသည်သင့်တော်သောပေါင်းစပ်မှုနှင့်အကျင့်စရိုက်များကိုတိုက်ထုတ်နိုင်သောရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံသောသင်္ချာပုံစံကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သုတေသီများသည်ဤဖြည့်စွက်စာများသောက်ရန်တစ်နေ့တာ၏အကောင်းဆုံးအချိန်ပေါ်မူတည်သည်။ သူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်ပေါ်မှာ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှုကိုဆန့်ကျင်သောအားဖြည့်အာဟာရအချို့ကိုလူငယ်များကညဘက်တွင်ယူသင့်ပြီးသက်ကြီးရွယ်အိုများသည်နေ့လယ်နေ့လယ်စာကိုအကောင်းဆုံးစားသုံးသင့်သည်။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်၊ အသက်အရွယ်နှင့်သင်မည်သို့နေထိုင်ပုံကိုထိခိုက်စေသည်” ဟုသုတေသီ Layton ကပြောကြားခဲ့သည်။ “ လူတွေဟာသူတို့အစာစားတဲ့အခါသတိရှိသင့်ပြီးသူတို့ရဲ့အိပ်စက်ခြင်း/နိုးခြင်းစက်ဝန်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နာရီကိုထိခိုက်စေတဲ့အခြားအရာများနှင့်တိုက်ဆိုင်ကြောင်းသေချာစေသင့်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် NMN အမှုန့်ကိုယူဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ကဘာလဲ။ NMN အမှုန့်မည်မျှယူရန်မဆုံးဖြတ်မီအသက်အရွယ်သည်အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ NMN ဖြည့်စွက်စာများသည်နိုးပြီးခြောက်နာရီအကြာတွင်လူငယ်များအတွက်အကျိုးအရှိဆုံးဖြစ်ကြောင်းလေ့လာခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်လူငယ်များသည်နေ့လယ်၌၎င်းတို့ကိုစားလျှင် Resveratrol ဖြည့်စွက်စာများသည်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ကြောင်းပြသသည်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်နေ့လယ်တွင်ဤဖြည့်စွက်စာများစားရန်အရေးကြီးသည်။
နောက်ဆုံးမေးခွန်း - ငါတို့ NMN အမှုန့်ကိုဘယ်လောက်ယူသင့်သလဲ။
ငါတို့သည်အထက်ပါမေးခွန်းများကိုဖတ်ပြီးနောက်၊ လူတိုင်းသည်ထောက်ခံချက်ကဲ့သို့အတိအကျဆေးပမာဏမဟုတ်ဘဲ NMN အမှုန့်အတွက်ကိုယ်ပိုင်ဆေးပမာဏကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်ကိုသိထားရမည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် NMN ဆေးပမာဏကိုမည်သို့တွက်ချက်နိုင်သနည်း။ နောက်ဆုံးလေ့လာမှုများအရ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ လေ့လာမှုမှ“ NMN ၏ ၁၀၀ မီလီဂရမ်/ကီလိုဂရမ်/နေ့သည်ကြွက်များတွင်အသက်အရွယ်နှင့်သက်ဆိုင်သောဇီဝကမ္မဆိုင်ရာကျဆင်းမှုအများစုကိုလျော့ချနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်လူသားများအတွက်ညီမျှသောမျက်နှာပြင်ပမာဏသည် ~ ၈ မီလီဂရမ်/ကီလိုဂရမ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ လူသားများတွေ့ရှိချက် " မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောသုတေသနလေ့လာမှုတစ်ခုအရလူနာသည်ကိုယ်အလေးချိန်တစ်ကီလိုလျှင် ၈ မီလီဂရမ် NMN အနည်းဆုံးယူရန်လိုသည်။ အကယ်၍ လေ့လာမှုမှန်ကန်ပါက NMN မည်မျှအနည်းဆုံးလိုအပ်သည်ကိုရှာဖွေရန်ပထမဆုံးသင်၏အလေးချိန်ကိုကီလိုဂရမ်နှင့် ၈ နှင့်မြှောက်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်သင်၏အလေးချိန်သည် ၅၀ ကီလိုဂရမ်ရှိလျှင်အကြံပြုထားသောပမာဏသည် ၄၀၀ မီလီဂရမ်ခန့်ဖြစ်သည်။
သင်သည် AASraw's ကဲ့သို့အလွန်ကောင်းမွန်သောဇီဝရရှိနိုင်မှုနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ဖြည့်စွက်စာကိုယူပါ NMN အမှုန့်ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်တုံ့ပြန်ချက်ကိုအခြေခံသောအောက်ပါဆေးများကိုအကြံပြုသည်။
အလေးချိန် အညွှန်း (နေ့စဉ်)
45kg ၄၅ ကီလိုဂရမ် * ၈ မီလီဂရမ် = ၃၆၀ မီလီဂရမ်
50kg ၄၅ ကီလိုဂရမ် * ၈ မီလီဂရမ် = ၃၆၀ မီလီဂရမ်
60kg ၄၅ ကီလိုဂရမ် * ၈ မီလီဂရမ် = ၃၆၀ မီလီဂရမ်
70kg ၄၅ ကီလိုဂရမ် * ၈ မီလီဂရမ် = ၃၆၀ မီလီဂရမ်
90kg ၄၅ ကီလိုဂရမ် * ၈ မီလီဂရမ် = ၃၆၀ မီလီဂရမ်
ဤဆေးများသည်အညွှန်းအတိုင်းသာဖြစ်သည်။ ဘယ်လောက်ယူသင့်သလဲ။ သင့်အပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီအထူးလေ့လာမှုကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့တွက်ချက်မှုတွေကိုတစ်နေ့ကိုကိုယ်အလေးချိန်တစ်ကီလို ၈ မီလီဂရမ်နဲ့စနိုင်တယ်။
သင်အကဲခတ်ကောင်းတစ် ဦး ဖြစ်လျှင် Dr. David Sinclair သည် NMN အမှုန့်သာမက resveratrol၊ metformin နှင့် aspirin ကဲ့သို့အခြားအရာများပါ ၀ င်သည်ကိုသတိပြုမိလိမ့်မည်။ NMN အမှုန့်နှင့်အတူလား။ အဘယ်ကြောင့်?
ဒေါက်တာ David Sinclair နှင့်သူ၏အဖွဲ့မှလေ့လာမှုများကို အခြေခံ၍ NMN အမှုန့်ကိုအခြားဖြည့်စွက်ဆေးများသည်အိုမင်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်ရန်အလွန်အထောက်အကူပြုသည်။ NMN အမှုန့်ကိုယူတဲ့အခါအခုဖြည့်စွက်စာ ၃ မျိုးကိုငါဝေမျှပေးမှာပါ။ ဖြည့်စွက်ဆေး ၂ မျိုးမှာ resveratrol နှင့် pterostilbene တို့ဖြစ်သည်။ Resveratrol သည်စပျစ်သီးအရေခွံတွင်ပမာဏနည်းသော stilbenoid ဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုများအရ resveratrol သည်နှလုံးရောဂါ၊ ကင်ဆာနှင့်အာရုံကြောဖွံ့ဖြိုးမှုအန္တရာယ်တို့ကိုလျှော့ချပေးနိုင်သည်။ David Sinclair က resveratrol သည် NMN နှင့်အတူတကွပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည်ဟုယုံကြည်သည်။ Resveratrol သည် sirtuin မျိုးဗီဇများကိုအသက်သွင်းရန်လိုအပ်ပြီး NMN သည် sirtuins များကိုလောင်ကျွမ်းရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော် resveratrol သည်အစာအိမ်မှစုပ်ယူရန်ခက်ခဲပြီး resveratrol သည်ခန္ဓာကိုယ်၌အဆုံးသတ်သည်။ ထို့ကြောင့် pterostilbene သည်ပိုကောင်းသောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Pterostilbene သည် resveratrol နှင့်အလွန်ဆင်တူသောမော်လီကျူးတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်သိသိသာသာစုပ်ယူမှုအားကောင်းပြီးလူ့ခန္ဓာကိုယ်၌ပိုတည်ငြိမ်သည်။
နောက်ထပ်ဖြည့်စွက်စာတစ်ခုကတော့ trimethylglycine (TMG)၊ NMN အမှုန့်ကိုအချိန်ကြာကြာယူတဲ့အခါ NMN ကမီသိုင်းအုပ်စုတွေကိုလှူဖို့ TMG (Betaine လို့ခေါ်တဲ့အမိုင်နိုအက်ဆစ်) ကိုယူဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ယူဆတယ်။ NMN ကို NAD+အဖြစ်သို့ပြောင်းသောအခါ nicotinamide (NAM) ကိုဖွဲ့စည်းသည်။ nicotinamide မြင့်မားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မကောင်းပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာသည် nicotinamide ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆီးမှထုတ်သော N-methyl nicotinamide သို့ methylated ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ methylate NAM ကိုရရှိရန်ခန္ဓာကိုယ်သည်သီအိုရီအရ methyl အုပ်စုများမှကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသည်။ သီအိုရီကသင် NMN များများယူလေ NAM ကိုဖယ်ရှားရန် methyl အုပ်စုများပိုလိုအပ်လေဖြစ်သည်။
Dr. Mercola နှင့်အတူအောက်ပါ podcast တွင် Dr. David Sinclair ကသူသည်ဤအရာကိုကာကွယ်ရန်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအနေနှင့် TMG ကိုယူသည်ဟု Dr. David Sinclair ၏ဤဗွီဒီယိုမှကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုသိရှိနိုင်သည်။
မွေးရာပါခုခံအားကိုလှုံ့ဆော်မှုဟုလူသိများသော COVID-19 ကဲ့သို့ကူးစက်ရောဂါခြိမ်းခြောက်မှုအားခန္ဓာကိုယ်မှကန ဦး တုံ့ပြန်မှုသည် NAD+ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုများသည် NAD+ ကိုလျော့နည်းစေသောကြောင့်ကူးစက်မှုများသည်ဆဲလ်အားဗိုင်းရပ်စ်ကို ၀ င်ရောက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် NAD+ ပျက်စီးခြင်းကိုတိုးစေသည်။ သိသိသာသာ NAD+ အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလျော့ကျလာသည်ကို COVID-19 တွင်ပြသခဲ့ပြီးအချို့သုတေသီများကဤဗိုင်းရပ်စ်သည်အထူးသဖြင့် NAD+ သိုလှောင်မှုကုန်ခမ်းနေသောသူများအတွက်အဓိကအကြောင်းအရင်းတစ်ခုဟုယူဆသည်။ ဒေါက်တာ Zhavoronkov က low-dose rapamycin ကိုတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ် metformin နှင့်ပေါင်းစပ်။ NAD+ boosters ကဲ့သို့စမ်းသပ်ခြင်းကိုအဆိုပြုခဲ့သည်။ နီကိုတင်းနိုက်ရိုင်ဘိုဇိုင်း (NR)၊ သို့မဟုတ် nicotinamide mononucleotide (NMN) သည်သက်ကြီးရွယ်အိုများကို gerolavic ကူးစက်မှုမှယနေ့ကာကွယ်ပေးပြီးကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါပြီးဆုံးသောအခါစီးပွားရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေနိုင်သည်။
ထို့အပြင်လေ့လာမှုများအရ NAD+ သည် COVID-19 ကဲ့သို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကာကွယ်ရန်ခုခံအားစနစ်တုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၃ ရက်၊ Isfahan ဆေးသိပ္ပံတက္ကသိုလ်မှထုတ်ဝေသောသုံးသပ်ချက်တစ်ခုက NAD+ အဆင့်နိမ့်ခြင်းသည် COVID-23 ကူးစက်ရောဂါတွင်ပိုမိုပြင်းထန်မှုနှင့်ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေနှုန်းများနှင့်ဆက်စပ်နိုင်ကြောင်းသက်သေပြသည်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများအရ NMN ဖြည့်စွက်စာများသည် NAD+ ကိုငယ်ရွယ်နုပျိုမှုအဆင့်သို့တိုးစေသည်။ NAD+ မော်လီကျူးကို SIRT2020 မျိုးရိုးဗီဇများတွင်ရရှိနိုင်စေခြင်းဖြင့်ရောဂါနှင့်ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကိုကာကွယ်ပေးသော၎င်းတို့၏စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေသည်။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုတွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ NAD+ ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုခံအားစနစ်ကိုထိန်းညှိရာမှာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ကပါ ၀ င်တာကိုသုတေသီတွေကတွေ့ရှိပါတယ်။
၎င်းတို့သည် macrophages (ဘက်တီးရီးယား၊ မှို၊ ကပ်ပါးကောင်များနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များကဲ့သို့သောအလားအလာရှိသောကျူးကျော်သူများကိုစားသော) သွေးဖြူဆဲလ်အမျိုးအစားတစ်ခုအားဆဲလ်ရှင်သန်မှုနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန် NAD+ မှပေါင်းစပ်ထားသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုသုံးသည်။ အားလုံးခြုံကြည့်ရင်လေ့လာမှုတွေက NMN နဲ့ရလဒ်တိုးလာတဲ့ NAD+ တွေကငါတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကူးစက်ရောဂါတွေနဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကိုတိုက်ထုတ်ရာမှာကူညီရာမှာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ကနေပါဝင်နေပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခုခံအားစနစ်ကိုမြှင့်တင်ပေးပြီးရောဂါကူးစက်မှုနှင့်ဖျားနာချိန်များတွင်သူတို့ကိုကူညီရန်အလားအလာရှိသည်။
ချီကာဂိုတက္ကသိုလ်မှ Dr. Robert Huizenga MD မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင်ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုတစ်ခုကိုမတ်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် COVID-22 ဖြင့်ဆေးရုံတင်ခဲ့သော ၅၅ နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အားသူ၏တုန့်ပြန်ချက်ကိုဖော်ပြသည့်အနေနှင့်သူမ၏အခြေအနေသည်ပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ ၁၃ သူမသည်သိသာထင်ရှားသောအဆုတ်ရောင်ရောဂါ၊ cytokine မုန်တိုင်းနှင့်အလွန်အမင်းမြင့်မားသော hsCRP၊ အရာမဟုတ်သောရောင်ရမ်းမှုအမှတ်အသားရှိသည်။ ဒေါက်တာ Huizenga သည်သူမအားပါးစပ် NMN, betaine နှင့် NaCl (IL-2020 ကိုလျော့ကျစေသောဆေး) နှင့်ကုသပေးပြီးသူမပေးခဲ့သော zinc သွပ်ဓာတ်ကိုဆက်လက်ကုသခဲ့သည်။ ၁၅ ရက်ရောက်သောအခါအဖျားသက်သာလာပြီးရောဂါလက္ခဏာများသိသိသာသာတိုးတက်လာသည်။ ၁၇ ရက်နေ့တွင်သူမသည်အိမ်ပြန်ရန်ဆေးရုံမှဆင်းခဲ့သည်။ ၂၃ ရက်ရောက်တော့သူမလက္ခဏာမပြတော့ပါ။ အခြားသက်ကြီးရွယ်အိုလူနာနှစ် ဦး ကို“ ကော့တေး” နှင့်ကုသခဲ့ပြီး၎င်းတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်အလားတူပြန်လည်ကောင်းမွန်မှုကိုခံစားခဲ့ရသည်။
Nicotinamide mononucleotide (NMN) နှင့် nicotinamide riboside (NR) သည်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောမော်လီကျူးတစ်ခုအတွက် biosynthetic ရှေ့ပြေးနိမိတ်များဖြစ်ကြသည်။ NMN တွင် phosphate အုပ်စုမပါ ၀ င်ပါ။ ဤထည့်သွင်းထားသောဖော့စဖိတ်အုပ်စုသည် NMN ကို NR ထက်မော်လီကျူးပိုကြီးစေသည်။ NR (nicotinamide riboside) နှင့် NMN (nicotinamide mononucleotide) အားဖြည့်ဆေးများသည်အိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုနှေးကွေးစေသောအလားအလာအကောင်းဆုံးဖြည့်စွက်ဆေးနှစ်မျိုးအဖြစ်မကြာခဏလူသိများသည်။ NR နှင့် NMN အမှုန့်သည် NAD+ အဆင့်ကိုတိုးစေသည်။ အဆင့်မြင့် NAD+ အဆင့်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ epigenome နှင့် DNA ကိုကာကွယ်ပေးသည်။ NAD+ အဆင့်များတိုးမြှင့်ခြင်းသည် ဦး နှောက်၊ နှလုံးသွေးကြောစနစ်နှင့်ကြွက်သားများကဲ့သို့သောကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအသီးသီးအတွက်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
NR နှင့် NMN သည် NAD+ အဆင့်ကိုမြင့်တက်စေသောကြောင့်၎င်းတို့ကို NAD boosters ဟုခေါ်လေ့ရှိသည်။ များစွာသောလေ့လာမှုများက NR နှင့် NMN သည်ပုံမှန်မဟုတ်သော epigenome၊ DNA ပျက်စီးခြင်း၊ ပရိုတင်းများစုဆောင်းခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း (အိုမင်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောရောင်ရမ်းနာကျင်ခြင်း) နှင့်အခြားအိုမင်းမှုယန္တရားများကဲ့သို့တိုးတက်စေနိုင်သည်။
ဒါပေမယ့်အဓိကမေးခွန်းကတော့ - ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲ၊ NMN အမှုန့်သို့မဟုတ် NR အမှုန့်လား။
လောလောဆယ်ကျန်းမာရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်သက်တမ်းသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ NMN နှင့် NR တို့၏ ဦး ခေါင်းကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုများမရှိပါ။ NMN နဲ့ NR ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရအောင်။
မင်း NMN အမှုန့်ကိုမင်း Google မှာတင်တဲ့အခါမင်းပေးသွင်းသူအများကြီးကိုငါတွေ့ခဲ့တယ်၊ မင်းဘယ်ဟာကအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲ၊ မင်းအတွက်သင့်တော်မလဲဆိုတာမင်းမသိဘူး။ NMN အမှုန့်ပေးသွင်းသူနှင့်စကားပြောသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးသင့်သောအရာကိုတွက်ဆရန်လိုသည်။ ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ငါ NMN အမှုန့်တွေကိုအွန်လိုင်းပေးသွင်းသူများစွာနဲ့ပြောဆိုခဲ့ပြီးရည်ညွှန်းရန်စာရင်းပြုစုပါ။
မင်းသူတို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက် (သို့) ဆိုင်တွေကိုစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်၊ သူတို့ကလိမ်လည်တာမဟုတ်ဘူး၊ စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ရောင်း ၀ ယ်သူဖြစ်ကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။ သူတို့ကမင်းရဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖြေတဲ့အခါအဲဒါကယုံကြည်ခြင်းဟုတ်မဟုတ်ငါတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းရိုးသားမှုဟာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးရဲ့အခြေခံပဲ။ မင်းသူတို့ရဲ့မေးခွန်းတွေကိုမေးတဲ့အခါ NMN အမှုန့်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ NMN အမှုန့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊
အကောင်းဆုံး NMN အမှုန့်သည် ၉၉% သန့်ရှင်းမှု (သို့) ပိုမြင့်လိမ့်မည်။ ၎င်းတွင် GMOs၊ နို့ထွက်ပစ္စည်း၊ ကြက်ဥ၊ ပဲပိစပ်၊ gluten၊ အတုဓာတုပစ္စည်းများ၊ လေးလံသောသတ္တုများ (သို့) အရည်ပျော်ပစ္စည်းကဲ့သို့ထုတ်ကုန်များပါ ၀ င်မည်မဟုတ်။ အတု NMN အမှုန့်အများစုသည်ကုန်ပစ္စည်းအမြောက်အများကိုဖြည့်စွက်ရန်ဖြည့်စွက်စာများသို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေးများကိုသုံးသည်။ ၎င်းသည်သင်ဘာသောက်နေသည်ကိုသင်မသိသောကြောင့်၎င်းသည်သင်၏ကျန်းမာရေးကိုကြီးစွာသောအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ မင်း NMN ဆေးတောင့်တွေကိုရောင်းတဲ့ကုမဏီတစ်ခုကနေမင်း NMN ကို ၀ ယ်ရင်ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
(3)ဆက်စပ်စာရွက်စာတမ်းများ - စမ်းသပ်အစီရင်ခံစာများ
NMN အမှုန့်စက်ရုံကဲ့သို့၊ ဆက်စပ်စာရွက်စာတမ်းများ (COA, HPLC, HNMR, MS) သည်အသုတ်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ပြီးနောက်၎င်းတို့၏အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းကိုစမ်းသပ်ရန်တတိယဓာတ်ခွဲခန်းများသို့ပို့ပါ။ နှင့်လေးလံသောသတ္တုများ) သည်စံနှုန်းနှင့်အညီစျေးကွက်တွင်ရောင်းချနိုင်ကြောင်းသေချာပါစေ၊ ၀ ယ်သူတစ် ဦး အနေနှင့် COA နှင့် HPLC အတွက်အထူးသဖြင့်ဤအစီရင်ခံစာများကိုကြည့်ရှုရန်တောင်းဆိုသင့်သည်။ တတိယပါတီ၏စစ်ဆေးမှုအချက်အလက်များအတွက်ပေးသွင်းသူ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ တတိယပါတီ၏စစ်ဆေးမှုကိုအတည်ပြုခြင်းသည်ဂုဏ်သတင်းကျော်စောသောအရင်းအမြစ်တစ်ခုမှသင် ၀ ယ်ယူရန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ တတိယအဖွဲ့အစည်းစမ်းသပ်ခြင်းကိုသုံးသောမည်သည့်ကုမ္ပဏီမဆိုထိုအချက်အလက်များအားသင်နှင့်အတူဝေမျှသင့်သည်။
NMN စျေးနှုန်းသည်ပေးသွင်းသူ၏အဆင်ပြေမှုကိုတိုင်းတာရန်သုံးနိုင်သောအခြားမက်ထရစ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ အမှုန့်နှင့်ဆေးတောင့်နှစ်ခုလုံးအတွက် NMN ပေးသွင်းသူအရေအတွက်ကိုစစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့်သင်တစ်ဂရမ်လျှင်ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းတစ်ခုစိတ်ကူးရလိမ့်မည်။ NMN အမှုန့်အတုသို့မဟုတ်အရည်အသွေးနိမ့်ထုတ်ကုန်များကိုသတိပြုပါ။ သင်တတ်နိုင်သမျှမည်သည့်အရာကိုမဆိုငွေချွေတာရန်အမြဲလိုလိုသွေးဆောင်နေသော်လည်း၎င်းသည် NMN အတွက်အထူးသဖြင့်သင်ပေးဆပ်ရမည့်အရာဖြစ်သည်။ တန်ဖိုးနည်း NMN သည်ဆေးဝါးအဆင့်မဟုတ်ဘဲဆေးဝါးအဆင့်သာဖြစ်လိမ့်မည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ NMN ၏အကျိုးကျေးဇူးများမှာတူညီခြင်းမရှိပေ။ စျေးကွက်တွင်လက်ရှိရှိ NMN ၏စျေးသက်သာသောရွေးချယ်စရာများသည်အစားအစာအဆင့်အတန်းရှိပြီးပိုးမွှားများကောင်းစွာပါ ၀ င်နိုင်သည်။ အမှန်တော့၊ တစ်ခါတစ်ရံအစားအစာအဆင့် NMN တွင် ၁၀% NMN ထက်နည်းသည်။ ဒါကိုစမ်းသပ်ဖို့ငါတို့မှာအစားအစာအဆင့်ရှိတယ် NMN နမူနာ စမ်းသပ်ပြီးသည်နှင့် ၈% NMN ဖြင့်ပြန်လာသည်။ သင်၏ဘတ်ဂျက်သည်အရေးကြီးသည်ဟုယူဆသော်လည်း၎င်းတို့မှကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုမမြင်လျှင်စျေးသက်သာသော NMN ထုတ်ကုန်များကိုရွေးချယ်သောအခါရေရှည်၌သင်ပိုမိုပေးချေနိုင်သည်။
အရည်အသွေး NMN သည်အရည်အသွေးပေးသွင်းသူများထံမှလာသည်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောပေးသွင်းသူသည်ကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုရှိသင့်သည်။ သင် ၀ ယ်သူကိုယ်စားလှယ်နှင့်စကားပြောသည့်အခါသူတို့အားလုံးကိုမေးခွန်းများပို့ပါ၊ သူတို့ကသင့်ကိုမကြာခင်အဖြေပေးလိမ့်မည်။ ထို့အပြင် ၀ ယ်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုသင်မည်သို့သိစေကာနောက်တစ်ဆင့်အတွက်သင်ဘာလုပ်သင့်သည်ကိုသိစေပါ၊ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးသင့်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ခြေရာခံပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ၀ န်ဆောင်မှုကောင်းသည် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုသည်မည်သည့်အချိန်မဆိုတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်အဆင်ပြေစွာဆက်သွယ်နိုင်သောခံစားသူတစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။
(6)အခြား Client များထံမှသုံးသပ်ချက်များ
ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည် NMN အမှုန့်ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာပေးလျှင်၎င်း၊ အခြားဖောက်သည်များထံမှတုံ့ပြန်ချက်အချို့ပေးနိုင်လျှင်၎င်းကုမ္ပဏီနှင့်ပတ်သက်သောသုံးသပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်ပါသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့မှာရောင်းအားစံချိန်နဲ့ဖောက်သည်တွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုရှိနေသရွေ့ဒါဟာအမှန်တရားပဲဆိုတာငါတို့သိနိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါတို့ NMN အမှုန့် ၀ ယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါအခြားဖောက်သည်တွေဆီကသုံးသပ်ချက်တွေကိုနောက်ဆုံးမှာမင်းအပေါ်မှာမူတည်တယ်ဆိုတာငါတို့သိရမယ်။
AASraw သည်စက်ရုံမှအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရထားသောကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး NMN အမှုန့်နှင့်အခြားအိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုဖြည့်တင်းပေးနိုင်သောဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ သင်သည်သူတို့၏ website-www.aasraw.com သို့အချိန်မရွေး သွား၍ သူတို့၏ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုတောင်းပါ၊ အရည်အသွေးလက်မှတ်နှင့်စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ ၃ ခုကိုမေးပါ။rd-lab၊ သူတို့၏ NMN အမှုန့်သည် ၉၉% သန့်ရှင်းသောဆေးဝါးအဆင့်အတန်းရှိပြီး၎င်းသည်ထိပ်ဆုံးဖြစ်သည်။ ငါသိသလောက်တော့သူတို့အော်ဒါအတည်ပြုပြီး ၁၂ နာရီတောင်မှမင်းကထုတ်တဲ့ထုတ်ကုန်ကိုသူတို့ပို့နိုင်တယ်၊ အမိန့်ကအတည်ပြုပြီး ၁၂ နာရီတောင်မှ၊ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်အရမ်းမြင့်တယ်၊ အဲဒါအတွက်သူတို့ကိုလက်မထောင်ပြရမယ်။ မှာကြားပြီးနောက် NMN အမှုန့်ပုံနှင့်ခြေရာခံနံပါတ်တို့ကိုသင်ရနိုင်သည်၊ ထို့နောက်သင်အွန်လိုင်းပါဆယ်ထုပ်ကိုခြေရာခံနိုင်ပြီးသင်၏အိမ်မှမည်မျှဝေး။ မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုသိနိုင်သည်။ ယခု AASraw အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
Nicotinamide riboside (NR) နှင့် nicotinamide mononucleotide (NMN) တို့သည်တိရိစ္ဆာန်များတွင်အသက်အရွယ်ဆက်စပ်ရောဂါများကိုသက်သာစေသည်။ ၎င်းတို့သည်ဆေးများကိုကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိပြီး NAD+ အဆင့်ကိုထိရောက်စွာမြှင့်တင်ပေးသည်။ ဤမော်လီကျူးများသည်မြင့်မားသောအပူချိန် (သို့) စိုထိုင်းဆမြင့်မားသောအခြေအနေများတွင်မတည်မြဲပါ။ ၎င်းတို့သည် sirtuins နှင့် PARP၊ DNA ပြုပြင်သောအင်ဇိုင်းတို့၏လုပ်ဆောင်မှုကိုဟန့်တားသော nicotinamide သို့လျင်မြန်စွာကျဆင်းစေသည်။ အကောင်းဆုံးရလဒ်များအတွက် NMN အမှုန့်ကို၎င်းတို့၏မူလကွန်တိန်နာများနှင့်ရေအရင်းအမြစ်များနှင့်ဝေးဝေးထားသင့်သည်။ ၃ လ (သို့) ကြာမြင့်စွာမစားသော NMN အမှုန့်များသည်၎င်းတို့အားအပြည့်အဝထိန်းသိမ်းထားရန်အအေးခန်းဖြစ်နိုင်သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တစ် ဦး အနေနှင့် AASraw သည်ရနိုင်သောအမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးနှင့်အထိရောက်ဆုံး NAD+ နှင့် NMN အမှုန့်ကိုအမြဲပေးသည်။
ဗြိတိန်မှ Tom ငါ့မိန်းမနဲ့ငါ NMN အမှုန့်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့လအတော်ကြာကစတင်ခဲ့ပြီးငါတို့ကဟောက်သံရပ်လိုက်ပြီးငါ့မိန်းမရဲ့အရေပြားပြဿနာတွေလျော့လာတယ်။ ငါတို့ကစိတ်ရဲ့ကြည်လင်မှုကိုပိုရသလိုပိုလည်းစွမ်းအင်ပိုရစေတယ်၊ ​​ငါမင်းမှာဗီတာမင်မျိုးစုံနဲ့ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဖြည့်စွက်စာတွေစားခဲ့ပေမယ့်ရလဒ်ကိုတကယ်မခံစားဖူးဘူး။ ၎င်းသည်လူသားများရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်မယုံနိုင်စရာအကောင်းဆုံးအာဟာရဖြည့်ဆေးများဖြစ်ပြီးအိုမင်းရင့်ရော်မှုဖြစ်စဉ်အတွက်အံ့သြဖွယ်တွေ့ရှိမှုတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ မကြာခင်မှာဒီဆေးလုံးကိုလူတိုင်းသိကြမယ်ထင်တယ်၊ ကင်ဆာသုတေသနလည်းသတိထားမိလိမ့်မယ်၊ ငါတို့ကအသက် ၅၀ ကျော်နေပြီ၊ ငါတို့ဘယ်လိုကွဲပြားတယ်ဆိုတာကိုလုံလောက်စွာမပြောနိုင်ဘူး။ ဘယ်သူကမင်းရဲ့အိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့အားဖြည့်ဆေးတွေကိုဒီထပ်ပေါင်းထည့်လိုက်တာကပိုကျန်းမာတယ်လို့ခံစားချင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမင်းကငါ့ကိုယုံကြည်ဖို့ပိုကောင်းလိမ့်မယ် !!!
တရုတ်ပြည်မှ LiMei ငါ NMN အမှုန့်ကိုရွေးခဲ့တယ်၊ အဲဒါကငါဖတ်တာကသွေးထဲမှာအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ကိုဖြည့်ပေးပြီးငါ့ရဲ့တစ်သျှူးတွေကိုအောက်ဆီဂျင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်။ ငါ့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီထုတ်ကုန်ကိုတောင်းဆိုနေတယ်၊ ​​ငါပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီးအာရုံမစိုက်နိုင်ဖြစ်ရတယ်။ ငါဖြစ်ခဲ့တယ် NMN အမှုန့်ကိုယူ ယခုနှစ်ပတ်ကြာသည်။ ငါစွမ်းအင်တိုးလာတာကိုငါတွေ့ခဲ့တယ်၊ ငါတစ်နေ့လုံးအလုပ်လုပ်ပြီးနောက်ပြင်းထန်တဲ့ cardio လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်မှာပါ ၀ င်နိုင်ခဲ့တယ်။ ငါ့ရဲ့အတွေးတွေကရှင်းပါတယ်၊ အစည်းအဝေးတွေမှာငါငိုက်နေလို့မဟုတ်ဘူး။ ငါ NMN ဖြည့်စွက်စာတွေကိုငါရှာနေတာရလဒ်တွေကိုငါအရမ်းပျော်တယ်။ ဒါ့အပြင်ငါက NMN စျေးနှုန်းကငါ့အတွက်နည်းနည်းမြင့်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကပိုအသက်ငယ်ချင်တယ်၊ ငါဒါကိုယူဖို့အခိုင်အမာပြောချင်တယ်။
သြစတေးလျမှဂယ်ရီ ၎င်းသည်အလွန်အိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုဆန့်ကျင်သောအာဟာရများဖြစ်သည်။ ခွန်အားတိုးလာတာကိုငါသတိထားမိတယ်၊ ငါ့အသက် ၄ နှစ်အရွယ်အအေးပတ်တာကိုငါသတိမထားမိဘဲလွယ်လွယ်နဲ့ပင်ပန်းတာမဟုတ်ဘူး။ ငါခံစားရသောစွမ်းအင်အမျိုးအစားသည်ကဖိန်းဓာတ်မြင့်မားခြင်းနှင့်ကွဲပြားသည်။ ငါအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားပြီးလန်းဆန်းသွားတယ်၊ စိတ်ပူတာဒါမှမဟုတ်အရမ်းနှိုးဆွတာကိုမခံစားရဘူး။ သတိရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်၏အိပ်စက်ခြင်းသည်တိုးတက်လာသည်။ ငါအိပ်ရေးဝတဲ့ပြသနာမရှိခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ညဘက်တွေမှာအများကြီးနိုးနိုင်တယ်။ NMN အမှုန့်နှင့်အတူငါဆန့်တန်းရှည်အိပ်သည်။ NMN သည်ကျွန်ုပ်အားနည်းလမ်းများစွာဖြင့်အကျိုးပြုနေသည်ဟုငါထင်သဖြင့်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်အလွန်အမင်းမပြောနိုင်ပါ။
အမေရိကန်မှ Steven NMN အမှုန့်အကြောင်းလေ့လာပြီး Dr. David Sinclair မှပြုလုပ်သော Harvard Study မှဖြစ်နိုင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုငါကြိုးစားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါပထမဆုံးစစမ်းတဲ့နေ့ကစပြီးငါ့ရဲ့စွမ်းအင်အဆင့်ခြားနားချက်ကိုငါသတိထားမိတယ်။ ငါအသက် ၅၇ နှစ်ရှိပြီ၊ ငါ့ရဲ့ဇီဝြဖစ်စဉ်ကပိုကောင်းပြောင်းလဲလာပုံရတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အစားအသောက်ပုံစံကိုမပြောင်းလဲခဲ့ပါ၊ သို့သော် ၄ ပတ်အတွင်းကိုယ်အလေးချိန် ၁၄ ပေါင်ကျဆင်းသွားသည်။ ထိုအချိန်သည်အမြဲတမ်းဆုံးရှုံးမှုကိုညွှန်ပြသည်။ ကျွန်တော့်ဇနီးသည် ၉ ပေါင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး Erythromelalgia ဟုခေါ်သောရှားပါးရောဂါတစ်မျိုးကိုခံစားနေရပြီး၎င်းသည်အစွန်းများကို neuropathic နာကျင်မှုဖြင့်အလွန်ပူစေပြီး၎င်းသည်တသမတ်တည်းရှိသည်။ သူမ၏ဆေးဝါးများအပြင်ဒြပ်ပေါင်း၏ Niacin အစိတ်အပိုင်းသည်နာကျင်မှုကိုအနည်းငယ်သက်သာစေပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပိုမိုစေခဲ့သည်။ ငါပထမအကြိမ်ထွက်ပြီးနောက် - အခြား NMN အမှုန့်ပေးသွင်းသူတစ် ဦး ကိုငါကြိုးစားခဲ့သည်။ ၎င်းဒြပ်ပေါင်းသည်ကွဲပြားသည်၊ စွမ်းအင်များပျောက်ကွယ်သွားသည်။ အဲဒါကြောင့်ငါ MAAC57 ကိုပြန်လာပြီးအခုငါလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်ရောက်နေတယ်။ မင်းသိတယ်၊ ငါကျယ်ပြန့်တဲ့မီးခိုးရောင်ဆံပင်အချို့ကဆိုးဆေးမပါဘဲမှောင်နေတာဘဲလို့ငါယုံတယ်။ မင်းအလုပ်လုပ်တာမင်းသိတယ်၊ ငါ ၅၇ ကိုကြည့်လို့တောင်မထင်ဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအံ့ဖွယ်အာဟာရ -NMN အမှုန့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ aasraw အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လူငယ်များ၏ရေပန်းသည်မကြာမီအချိန်တွင်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်မရှိသောအံ့သြဖွယ်ဒဏ္mythာရီတစ်ခုဖြစ်နေသော်လည်းအိုမင်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်သောဆေးဝါးများနောက်ကွယ်မှသိပ္ပံပညာသည်ဆက်လက်တိုးတက်နေသည်။ တစ်နေ့တွင်သင်အံ့ဖွယ်ဆေးလုံးကို ယူ၍ လူငယ်တစ် ဦး အဖြစ်ဘ ၀ ကိုတစ်ဖန်ပြန်လည်ခံစားနိုင်လိမ့်မည်။ တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများတွင် NAD+၏မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်အိုမင်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်သောဂုဏ်သတ္တိများကိုပြသခဲ့သည်။ ယခုအခါသုတေသီများသည်လူသားများတွင်မော်လီကျူးများ၏လုံခြုံမှုနှင့်ထိရောက်မှုကိုစုံစမ်းရန်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများဖြင့်ရှေ့သို့တိုးနေသော်လည်းထိုအချိန်ထိ NAD နှင့် NMN အာဟာရများ လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှဆဲလ်များအိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုသိသိသာသာနှေးကွေးစေသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုအမှန်တကယ်ပေးသည်။ သူတို့ကငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကျိုးရှိသရွေ့အဲဒါကိုပြန်ပြီးငယ်ရွယ်ကြရအောင်အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်။
 မြောက်, BJ, Rosenberg, MA, Jeganathan, KB, Hafner, AV, Michan, S. , Dai, J. , … & van Deursen, JM (2014) ။ SIRT2 သည်စစ်ဆေးရေးဂိတ် kinase BubR1 ကိုသက်တမ်းတိုးစေသည်။ EMBO ဂျာနယ်၊ e201386907
 Kiss, T, Nyúl-Tóth, Á, Balasubramanian, P. , Tarantini, S. , Ahire, C, Yabluchanskiy, A, … & Ungvari, Z. (၂၀၂၀) ။ Nicotinamide mononucleotide (NMN) ဖြည့်စွက်သည်ကြွက်များတွင် neurovascular ပြန်လည်နုပျိုမှုကိုအားပေးသည်။ GeroScience၊ ၁-၂၀
 Grozio, A. , Mills, KF, Yoshino, J. , Bruzzone, S. , Sociali, G. , Tokizane, K. , … & Imai, SI (၂၀၁၉) ။ Slc2019a12 သည် nicotinamide mononucleotide သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်သည်။ သဘာဝဇီဝြဖစ်, 8 (1), 1-47 ။
 Li, J. , Bonkowski, MS, Moniot, S. , Zhang, D, Hubbard, BP, Ling, AJ, … & Sinclair, DA (2017) ။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်ချိန်၌ပရိုတင်းနှင့်အသားဓာတ်အပြန်အလှန်ထိန်းညှိခြင်းကိုထိန်းညှိပေးသော NAD+ စည်းနှောင်အိတ် သိပ္ပံ၊ ၃၅၅ (၆၃၃၁)၊ ၁၃၁၂-၁၃၁၇ ။
 Resippratrol ကို ကျော်လွန်၍ Stipp D. Bead: The Anti-Aging NAD Fad သိပ္ပံအမေရိကန်ဘလော့ကွန်ယက် မတ်လ ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်။
 Tarragó MG, Chini CC, Kanamori KS, Warner GM, Caride A, de Oliveira GC ။ + ငြင်းပါ။ ဆဲလ် Metabolism ။ မေလ ၂၀၁၈၊ ၂၇ (၅): ၁၀၈၁–၁၀၉၅ ။ PMC 2018. PMID 27. doi: 5/j.cmet.1081 ။
 Bogan KL, Brenner C. Nicotinic acid, nicotinamide, နှင့် nicotinamide riboside: လူသားအာဟာရအတွက် NAD+ ရှေ့ပြေးဗီတာမင်များ၏မော်လီကျူးအကဲဖြတ်မှု နှစ်စဉ်အာဟာရပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ၂၈: ၁၁၅-၃၀ ။ PMID ၁၈၄၂၉၆၉၉ ။
 Fletcher RS, Lavery GG (အောက်တိုဘာလ ၂၀၁၈) "NAD+ metabolism ၏စည်းမျဉ်းများတွင် nicotinamide riboside kinases များပေါ်ပေါက်လာခြင်း" မော်လီကျူး Endocrinology ဂျာနယ်။ ၆၁ (၃): R2018 – R61 doi: 3/JME-107-121 PMC 10.1530. PMID ၃၀၃၀၇၁၅၉ ။
7238 Views စာ
FDA မှ Regorafenib အူမကြီးကင်ဆာ丨 GIST 丨 HCC ကိုကုသသည်